Social Media maka Ọrụ Uche | Martech Zone
Social Media maka Ọrụ Uche
Saturday, October 15, 2011 Tọzdee, Disemba 7, 2017 Douglas Karr
Shownyaahụ redio na-egosi na Austin na Jeffrey si Orabrush bụ mkparịta ụka dị ịtụnanya na otu akụkụ ya hiwere isi na agụmakwụkwọ. Jeffrey gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Brigham Young ma kọwaa agụmakwụkwọ e nyere ya na mpụga klas na azụmaahịa ịntanetị. O doro anya na akwụ ụgwọ - ọrụ ya na Orabrush abụtụghị ihe ịtụnanya.
Ihe omuma ohuru a site na Volta Creative na-elekwasị anya na mgbasa ozi mgbasa ozi maka ọrụ ịchọrọ:
O doro anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na azụmahịa ga-anọ. Na 79% nke ụlọ ọrụ na-eji ụfọdụ akụkụ nke mgbasa ozi mmekọrịta, ọhụụ ọhụụ na mmekọrịta ndị ahịa na azụmaahịa amalitela. Ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji jikwaa na ịzụlite mmekọrịta a n'ịntanetị. Dika nkwuputa nkwuputa ohuru a, o gha abu ndi ochichi ndi n’eme ohuru na ndi ohuru ndi n’agha, ndi n’adighi ike ka ndi ozo dochie anya ha.
Steve Jobs: Ihe omuma
Biko Solee Ihu Mmiri Ndabere Gị